Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Paronychia ကျမမှာ ခြေစွယ် ငုတ်ငုတ်နေလို့ပါ
Paronychia ကျမမှာ ခြေစွယ် ငုတ်ငုတ်နေလို့ပါ
ကျွန်မရဲ့ ခြေမက ခြေစွယ်ငုတ်ငုတ်နေပါတယ်။ ခြေစွယ်က ရှည်လာရင် အသားကိုသွားသွားစိုက်ပြီး ထိုးနေပါတယ်။ ပြီးရင်ရောင်လာပြီးတော့ ပြည်တည်ပါတယ်။ တိုအောင်ညပ်လဲ ပြန်ရှည်လာရင် အဲဒီအတိုင်း ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန် ပြတော့ ထုံဆေးထိုးပြီး ခြေသည်းခွံကို ဆွဲထုတ်ပါတယ်။ အဲဒါလဲ ရှည်လာတော့ ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ ခါတောင် အဲလို လုပ်ပြီးပါပြီ။ ရှည်လာတော့ ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ နှစ်လောက် ရှိပါပြီ။ လမ်း ၃ဝ က ခြေဆွယ်ဖော်တဲ့ဆီမှာလဲ ခဏခဏ သွားဖော်ပါတယ်။ မပျောက်ပါဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ။
ခြေစွယ်ငုတ်တာကို Paronychia ခေါ်တယ်။ ဟုတ်တယ် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နှစ်မျိုးရှိတယ်၊ ရက်တိုနဲ့ နာတာရှည်။ အသားနုနဲ့ ခြေသည်း-လက်သည်း အပြန်အလှန်၊ အထက်-အောက် တိုးဝင်ကြတာပါ။ အသားနုနုက ဖေါင်း-ရောင်လာမယ်။ ပိုးဝင်လာနိုင်တယ်။ ပိုးကလဲ နှစ်မျိုး။ (ဗက်တီးရီးယား) နဲ့ (Yeast or Mold) ဖန်းဂတ်စ် (မှို)။
1. Acute paronychia ရက်တိုအမျိုးအစားကို ဒီလိုလုပ်ပါ။
• တနေ့ကို ရေနွေးနဲ့ ၃-၄ ခါ အုပ်ပေးပါ။
• Manicuring ခြေသည်းပြင်တာ၊ Finger sucking လက်သည်းကို ပါးစပ်နဲ့ ကိုက်တာ၊ ကိုယ့်ဖါသာလှီးတာ ရှောင်ပါ။
• ပဋိဇီဝဆေး တခုခုသောက်ပါ။
• Miconazole မှိုဆေးလိမ်းပါ။ Ketoconazole or Fluconazole မှိုဆေးသောက်ပါ။
• Diabetes ဆီးချို စစ်ဆေး-ကုသပါ။
• ပြည်တည်လာရင် ပြည်ခွဲထုတ်ပါ။
• ပိုးသေအောင် လုပ်ပြီးနောက်မှသာ ခွဲစိတ်ကုသပါ။
Acute paronychia ရက်တိုအမျိုးအစား၊ ဒါးမသုံးဘဲ ခွဲနည်း
o အနာကို အရက်ပြန်၊ အိုင်အိုင်ဒင်း ၂% လိမ်းပြီး၊
o ဖေါင်းကြွနေတာကို Metal probe or Elevator နဲ့ Separation မတင်ပြီး ပြည်-မန်းရည်ထွက်အောင် လုပ်တယ်။
o ခြေသည်းရဲ့ အဖျားပိုင်း ၃ ပုံ ၁ ပုံကို ကပ်ကြေးနဲ့ ဖြတ်ပေးတယ်။ အသားဆိုင်ကို မလှီးပါ။
o Antibiotics ပဋိဇီဝဆေး oral ၅-၇ ရက် အသောက်ခိုင်းပါမယ်။
o အနာကို Cipladine/Iodine/Betadine လိမ်းပြီး ပတ္တီးစည်းပေးမယ်။
o မေးခိုင်းကာကွယ်ဆေး ATT ထိုးပေးပါမယ်။
o ၂ ရက်နေရင် ပတ္တီးဖြေပြီး၊ ဆားရည်နွေးမှာ စိတ်ခိုင်းပါမယ်။ တခါလုပ် ၁ဝ-၁၅ မိနစ်၊ တနေ့ ၃-၄ ခါ။
Acute paronychia ရက်တိုအမျိုးအစား၊ ဒါးသုံး ခွဲစိတ်နည်း
o အနာကို အရက်ပြန်၊ အိုင်အိုင်ဒင်း ၂% လိမ်းမယ်၊
o 1% Lidocaine (Xylocaine) Digital anesthetic block ထုံဆေးထိုးမယ်။
o ဒါးနံပါတ် 11-15 blade ကို သုံးမယ်။
o ခြေသည်း-လက်သည်းနဲ့ ဝေးရာဆီကို ဒါးချက်သွားမယ်။
o ဖေါင်းနေတာကို ခွဲပြီး အောက်က ပြည်-မန်းရည်ထွက်စေမယ်။
o ဒါးရာကို လိုအပ်ရင် ခြေသည်း-လက်သည်း အခြေထိ ရောက်ပါစေမယ်။
o ခြေသည်းရဲ့ အဖျားပိုင်း ၃ ပုံ ၁ ပုံကို ကပ်ကြေးနဲ့ ဖြတ်ပေးမယ်။
o Antibiotics ပဋိဇီဝဆေး ၅-၇ ရက် သောက်ခိုင်းပါမယ်။
o ၂ ရက်နေရင် ပတ္တီးဖြပြီး အနာနေရာကို ဆားရည်နွေးမှာ စိတ်ခိုင်းပါမယ်။ တခါလုပ် ၁ဝ-၁၅ မိနစ်၊ တနေ့ ၃-၄ ခါလုပ်ပါ။
o မေးခိုင်းကာကွယ်ဆေး ATT ထိုးပါမယ်။
2. Chronic paronychia နာတာရှည်အမျိုးအစား ဖြစ်နေရင် -
ပိုးမဝင်အောင် ဂရုစိုက်ပါ။ ဖိနပ်မပါဘဲ လမ်းသွားတာ၊ စိုထိုင်းတာ ရှောင်ပါ၊ အပြင်က ပြန်လာရင် ချက်ချင်း ခြေဆေးပါ။ လိုအပ်ရင် ခြေအိတ် ပြောင်းသုံးပါ။ (ကော်တွန်) ခြည်ထည်ကိုသာ သုံးပါ။
Eponychial Marsupialization ခေါ် ခွဲစိတ်နည်း
o ခွဲမဲ့နေရာကို ဆပ်ပြာ-ရေနဲ့ဆေးကြောပါ။ အရက်ပြန်၊ အိုင်အိုဒင်းလိမ်းမယ်။
o 1% lidocaine (Xylocaine) ထုံဆေးထိုးမယ်။
o သွေးထွက် သက်သာအောင် Tourniquet နည်းသုံးတယ်။
o Crescent-shaped incision ဖေါင်းကြွနေတဲ့ အသားစိုင်ရဲ့ ဘေးပါတ်လည် ၁ မီလီမီတာအကွာ လခြမ်းပုံ ဒါးရာ ပေးမယ်။
o ခြေသည်း-လက်သည်း ပုံပြောင်းနေရင် လှီးရတတ်တယ်။
o ခြေသည်းအကောင်းရဲ့ အပြင်ပိုင်းကိုပါ အစ-အဆုံး ပါပါစေ။ ဆေးထည့်၊ ပတ္တီးစည်းပေးမယ်။
o Clindamycin (Cleocin) တခါသောက် 150-450 mg တနေ့ ၃-၄ ကြိမ်၊
o Amoxicillin and Clavulanic acid (Augmentin) တခါသောက် 500mg တနေ့ ၂-၃ ကြိမ်၊
o Antifungals Cream and Lotion လိမ်းဆေး တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၂-၆ ပါတ်။
o Ketoconazole (Nizoral) တခါသောက် 200-400 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊